India nanao veloma ny mpitsabo matihanina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » India nanao veloma ny mpitsabo matihanina
Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
India nanao veloma farany an'i Dr. Ankur Bhatia
India dia nanana ampaham-pahafatesana mahatsiravina tao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany tato ho ato, ary ny maro amin'izy ireo dia azo omena COVID-19.
Ireo fahafatesan'ny coronavirus farany teo ireo dia nahitana an'i Anil Bhandari, Vijay Thakur, ary Rajendera Kumar.
Androany, nampiana an'io lisitr'ireo fahafatesan'ny fandraisam-bahiny io miaraka amin'ny dokotera Dr. Ankur Bhatia.
Ny dokotera Bhatia dia maty tamin'ny faha-48 taonany ary ny antony nahafaty azy dia voatanisa ho fisamborana aretim-po.
Dr. Ankur Bhatia dia iray amin'ireo olona mahay indrindra teo amin'ny sehatry ny indostria, ary izy no nanao làlana voalohany tamin'ny fampiasana ny haitao tamin'ny famandrihana fiaramanidina sy ny fitantanana seranam-piaramanidina. Izy koa dia nivadika ho hotely misy ny rojo Roseate any India sy any ivelany. Ankur dia niaraka tamina fikambanan-dia maro, izay nandraisany anjara lehibe.
Dr. Bhatia no Tale Mpanatanteraky ny Vorona Vorona izay miasa eo amin'ny sehatry ny varotra marobe, ao anatin'izany ny elatra indiana an'ny orinasan-teknolojia fizahan-tany Amadeus, serivisy fitantanana tany an-tseranana BWFS, ary vondron'ny mpivarotra BMW ao Delhi ambanin'ny Bird Automotive.
Amin'ny maha talen'ny fahefana mpanatanteraka azy, Bhatia dia voatanisa noho ny fitomboan'ny orinasan'ny Bird Group, anisan'izany ny fampitomboana ny marika Roseate Hotels & Resorts.
Bird Group dia namoaka fanambarana nilaza hoe: “Alahelo mafy no ampahafantarinay anao ny fahafatesan'ny Dr. Ankur Bhatia malalantsika, Tale Mpanatanteraka, Vondron'Olona. Ny Dr. Bhatia (48) dia voan'ny aretim-po tamin'ity maraina ity ary namoy ny ainy.
“Tsy vitan'ny namoy ny mpitondra antsika, ny fahitanay, fa very kosa ny zanak'olombelona. Tena taitra tanteraka ny fianakavian'i Bhatia ary mangataka anao hanaja ny fiainany manokana mandritra izao fotoan-tsarotra izao. ”